Izindlela Ezi-7 Zobuchwepheshe Zingonakalisa Umkhiqizo Wakho | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Agasti 23, 2019 ULwesine, April 1, 2021 Douglas Karr
Kuleli sonto, bengisesizeni ngenza umhlangano wokumaketha wedijithali wohlobo lomhlaba jikelele. Indawo yokusebenzela ibisenziwa yimina futhi yathuthukiswa ngokubambisana ngengxenye I-Butler University nothisha omangalisayo osebenza ngokugcwele enhlanganweni.
Lapho sifika esigabeni seplatifomu iMartech Stack ukufundisa abasebenzi ngezinsizakusebenza zobuchwepheshe ngaphakathi kwenhlangano, ngashaywa yinhlanganisela yamapulatifomu. Akuzange kubonakale njengeMartech Stack yakho ejwayelekile yesine ephezulu kwesokudla, amapulatifomu webhizinisi. Kwakuyinhlanganisela esezingeni lomhlaba, amapulatifomu wemithombo evulekile, izinhlelo zokusebenza ezincane, kanye nabalingani be-ejensi yangaphandle.
Le nkampani yakha iMartech Stack yayo ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi ingaletha umlayezo ofanele kwithemba elifanele noma kumakhasimende ngesikhathi esifanele. Zonke izingcezu zikhona futhi zikhona ... ezinye zihlanganiswe ngaphandle komthungo kanti ezinye zidinga izinqubo ezenziwa ngesandla ... kepha ngakunye kukhethwe ngokucophelela ukuqinisekisa izingqinamba zokuhambisana, ukukhathazeka ngokuphepha, kanye nomthelela omkhulu kuzidingo zokumaketha jikelele.
Ngaphakathi komhlangano wokusebenzela, kwethulwe iStack Stack okokugcina kubasebenzi. Futhi, ngokomqondo, aluzange lunikezwe ulwazi oluningi mayelana nokuthi amandla weplatifomu ngayinye ayenzani nokuthi asetshenziswa kanjani.
Ngoba ubuholi bezokumaketha benkampani befuna ukuthengisa, ukukhangisa, ukumaketha, kanye namaqembu wesipiliyoni samakhasimende ukuze agxile kwi isipiliyoni samakhasimende, bese ukusebenzisa ubuchwepheshe ukuletha lolo lwazi. Kwakubalulekile ukuthi ungagxili kulokho ayengakwenza kwenziwe ngobuchwepheshe… kepha ukugxila kokufanele kwenziwe ukuthi ubuchwepheshe bukhona noma cha. Baze bavume ukuthi kunezicucu esitaki ezingasetshenziswanga ngisho nangezici ezaziwa kakhulu ngazo.
Inkampani isebenzise isifinyezo, I-POST, ngenqubo yokumaketha kwidijithali:
Abantu - Khomba izethameli eziqondiwe zomzamo.
Izinhloso - Chaza ukuthi yiziphi izinhloso noma imiphumela abafuna ukuyizuza ngomzamo wokumaketha.
Isu - Chaza iziteshi, izindlela zokuxhumana, imidiya, nohambo lokuhambisa kulokho okuhlosiwe ukufinyelela lezo zinhloso.
Ubuchwepheshe - Khomba lobo buchwepheshe obungasiza ukucwaninga abantu, ukukala izinhloso, nokusebenzisa isu.
Ingabe Ubuchwepheshe Buyalimaza Umkhiqizo Wakho?
Ubuchwepheshe abulimazi umkhiqizo waleli klayenti ngoba balubeke eqhulwini ngokufanele. Izinqubo, izinkinga, izabelomali, izinsiza, ukuqeqeshwa, ukuphepha, nokuhambisana konke kubuyekezwa ngokucophelela ngaphambi ubuchwepheshe buyakhethwa. Ubuchwepheshe abubonakali as Isixazululo, sithathwa njengamathuluzi adingekayo ukuletha isixazululo ngempumelelo nangempumelelo.
Kepha akusikho engikubonayo nazo zonke izinkampani. Nazi ezinye izindlela engibona ngazo ubuchwepheshe bunomthelela omkhulu empilweni yezinye izinhlobo.
Apps - Abathengi abafuni ukuxhumana namabhizinisi. Isibonelo esisodwa imboni yezezimali. Abathengi abafuni ukukhuluma nomeluleki wezezimali, ibhange, noma umthengisi womshuwalense… bafuna uhlelo lokusebenza oluhle okulula ukulusebenzisa futhi olunazo zonke izici abazidingayo. Ngenkathi izinhlelo zokusebenza ziyisidingo esiphelele, kubalulekile ukuthi wazi ukuthi lokhu kwephule noma ibuphi ubuhlobo babantu nomkhiqizo wakho. Inkampani yakho kufanele isebenze kanzima kabili ukwakha ubudlelwano nalawa makhasimende ngezindlela ezifunwayo. Izinkampani ezisebenzisa izinhlelo zokusebenza ukufaka esikhundleni sobudlelwano ngokusebenza kahle kwezindleko nazo zimane zishiya umkhiqizo wazo usengozini yokuthi lapho izimbangi zethula uhlelo olungcono, olulula. Izinhlelo zokusebenza ziyisidingo, kepha izinkampani kufanele ziqinisekise ukuthi zisebenzisa eminye imizamo ezungezile ukufundisa, ukusiza, nokuxhumana ngempumelelo nabasebenzisi bohlelo lwabo lokusebenza. Uhlelo lokusebenza alwanele!
Amabhuzu - Uma uzama ukufihla uhlelo lokuphendula oluzenzakalelayo njengokuxhumana komuntu, ubeka umkhiqizo wakho engcupheni enkulu. Njengoba ama-bots akhuphuka ngokuthandwa, ngawasebenzisela amaklayenti amaningana… futhi ngahlehla ngokushesha noma ngashintsha kakhulu ukusetshenziswa kwawo. Inkinga ukuthi abasebenzisi baqale bacabanga ukuthi bakhuluma nomuntu. Lapho bethola ngephutha noma ngokungahambi kahle ukuthi kwakuyi-bot, abagcinanga nje ngokukhungatheka, babethukuthele kabi. Bazizwa bekhohlisiwe. Manje, lapho ngisiza amaklayenti ekuthumeleni ama-bots, siqinisekisa ukuthi amakhasimende azi ngokuphelele ukuthi akhuluma nesisebenzi esizisebenzelayo… futhi sinikeza indlela yokudlulisa ngokushesha kumuntu wangempela.
imeyili - Elinye iklayenti engangisebenza kulo laliklame futhi lasungula uhlelo oluyinkimbinkimbi lapho bethenga khona uhlu futhi baletha izinkulungwane zama-imeyili ahlosiwe kakhulu kubathengi abazoba khona. Kuhanjiswe ngobuhlakani kuzungeza amasistimu wedumela ukuqinisekisa ukuthi imilayezo iyenze yangena ebhokisini lokungenayo labo abalindelayo. Lapho bengitshela amashumi ezinkulungwane zemiyalezo abebekade beyithumela masonto onke, angikwazanga ukuvala umlomo wami. Ngibuze ukuthi isebenza kanjani imizamo ye-SPAM. Bacasuke kancane kulokhu kusolwa njengoba beziqhenya ngemizamo… kepha bavumile ukuthi akuholelanga ekuholeni okukodwa. Ngibacindezele ukuyivala ngokushesha futhi sathuthela isu enkambisweni ebhekiswe kakhulu engenayo manje ekhiqiza imikhondo efanelekile ehanjiswa ngempumelelo ohambweni lwamakhasimende. Kuze kube namuhla, asinayo indlela yokwazi ukuthi bangaki abangahle babe ngamakhasimende okungenzeka balahlekile ngokugaxela ukuphuma kwabo. Ukuthumela imiyalezo kushibhile, ngakho-ke ama-brand ahlala elingeka ukuba athumele imiyalezo eminingi. Imiphumela ayijwayele ukutholakala kumadola nangamasenti, noma kunjalo. Ngiyekile ukwenza ibhizinisi ngemikhiqizo eminingana evele yangigxeka kakhulu.
Ukuhlakanipha okungekhona okwangempela - Inhlamvu entsha yesiliva yayo yonke iMartech Stack yikhono lokusebenzisa ukufunda komshini ukuze uzenzele ngokwakho imizamo yokuthengisa. Kuthengiswa njengokulula, kepha kukude nokulula. Ukuthunyelwa kwe-AI kudinga ososayensi bedatha abaqonda ukuthi bangahlaziya kanjani idatha, bakha futhi bahlole amamodeli, bahlukanise okuguqukayo nemiphumela, basebenzise ngempumelelo kuwo wonke amanethiwekhi, bamise amaphethini ezinqumo ezinamandla, futhi bahlole ukuphazamiseka okuyimbangela. Isetshenziswe kabi, i-AI ingakhawulela kakhulu amakhono akho okuthumela imiyalezo… noma okubi kakhulu… yenza izinqumo ezizenzakalelayo ngokuya ngemodeli enamaphutha nezihlahla zezinqumo.
Inqubomgomo - Imininingwane miningi. Izinkampani zithenga futhi zithwebule enye ingxenye yayo, zenze ngezifiso, futhi zicindezele amakhasimende ukuthi athenge. Inkinga ukuthi abathengi abaliboni inani ledatha yabo elithunyelwayo, elithengiswayo, nelabiwayo. Ihlukunyezwa ngabadlali ababi… futhi umphumela kuba umthetho ozophazamisa kakhulu ikhono labakhangisi lokuxhumana ngempumelelo namathemba namakhasimende. Umsebenzi usemikhakheni yokusebenzisa idatha ngokucophelela, ukuxhumana namakhasimende kanye namathemba wokuthi isetshenziswa kanjani, itholakalaphi nokuthi ingasuswa kanjani. Uma singasebenzi ekwenzeni imizamo yethu ibe sobala, uhulumeni (futhi sekuvele kunjaloukonakalisa ikhono lethu lokusebenzisa idatha ngempumelelo. Uma ucabanga ukuthi ukukhangisa okubi kudlangile manje… vele ulinde izinkampani zingabe zisakwazi ukufinyelela kudatha.
Security - Idatha inikeza enye inkinga… ukuphepha. Kuyangimangaza inani lezinkampani ezigcina idatha yomuntu siqu ngaphandle kokuyibethela futhi ziyivikele ngokufanele. Anginaso isiqiniseko sokuthi kunezinkampani eziningi kakhulu lapho ezithatha le ngozi ngokungathi sína, futhi nginomuzwa wokuthi sizobona ukuwohloka kwemikhiqizo ngaphansi kwezinhlawulo zomthetho namacala enkantolo kungekudala. Sisanda kubona i-Equifax ixazulula ukwephulwa kwabo $ 700 million. Wenzani ukuvikela idatha yekhasimende lakho neyamakhasimende namuhla? Uma ungatshali imali kochwepheshe bezokuphepha abavela eceleni nokuhlolwa kwamabhuku, ubeka idumela lomkhiqizo wakho nenzuzo yesikhathi esizayo engcupheni. Futhi uma ugcina amaphasiwedi kuspredishithi futhi uwahlanganyela nge-imeyili, uzongena enkingeni. Amapulatifomu wokuphatha iphasiwedi nokuqinisekiswa okubili kuyisidingo.
Stack - Ngiyakhathazeka kwesinye isikhathi lapho ngizwa ngamakhulu ezinkulungwane, noma kwesinye isikhathi izigidi zamaRandi, ukuthi ochwepheshe bezentengiso bamabhizinisi bachitha ku-investimenti yesitaki iMartech. Kuvame ukwenziwa ngoba isisombululo esamukelwa kabanzi sithathwa njenge- Ephephile utshalomali. Ngemuva kwakho konke, umhlaziyi wesithathu ubika ngokucophelela futhi akhethe lezi zinkampani… uzibeka ku-quadrant ephezulu kwesokudla. Kungani inkampani ingenzanga imali kubuchwepheshe obungaguqula imizamo yabo yokumaketha ngokwedijithali? Yebo, kunezizathu eziningi. Ungahle ungabi nezinsiza zokufuduka usebenzise isixazululo. Ungahle ungabi nezinqubo endaweni yokusebenzisa isisombululo ngokugcwele. Ungahle ungabinaso isabelomali sokuhlanganisa nokwenza isixazululo sisebenze ngendlela elula Isifaniso engisisebenzisayo yilesi…
Ukuthenga ibhizinisi elisezingeni lomhlaba iMartech Stack kufana nokuthenga isithabathaba somuzi. Uyathenga isithabathaba somuzi, kepha okulethwayo amaloli amaningi, amapayipi, ukhonkolo, upende, iminyango, amawindi nakho konke okunye okudingayo. Uthole isithabathaba somuzi… manje sekungumsebenzi wakho ukuthola ukuthi ungakha kanjani.
Empandeni wethu njengabakhangisi bedijithali, sizama ukukhulisa idumela lomkhiqizo wethu, sikhulise igunya lethu embonini yethu, futhi sakhe ukuthembana phakathi komkhiqizo wethu namathemba ethu namakhasimende. Ukumaketha kumayelana nobudlelwano. Kuze kube namuhla, ubuchwepheshe abunakususa ubudlelwano babantu phakathi komkhiqizo wethu namakhasimende ethu. Lokho kungashintsha ngokuzayo… kodwa angikholwa ukuthi sizokubona lokho empilweni yami.
Lokhu akukhona okuthunyelwe ngobuchwepheshe obubi… okuthunyelwe mayelana nokuthi ukusetshenziswa kabi, ukuxhashazwa, noma okulindelwe kwehaba kwezobuchwepheshe kungalimaza kanjani umkhiqizo wabo. Siyinkinga, hhayi ubuchwepheshe. Ubuchwepheshe yiglue kanye nebhuloho esikudingayo ukukala imizamo yethu - kuyisidingo esiphelele kubo bonke abakhangisi banamuhla. Kepha kufanele siqaphele ekusebenziseni ubuchwepheshe ukuqinisekisa ukuthi asikonakalisi konke esikusebenze kanzima sakha.